Maxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay Askari kufsi geystay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay Askari kufsi geystay
Maxkamadda ciidamada oo dil ku xukuntay Askari kufsi geystay
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay Dable Xoogga Dalka Maxamed Xuseen Cilmi oo lagu helay dambi ah inuu kufsi u geystay gabar afajir ah.
Qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa waxaa lagu sheegay in Dable Xoogga Maxamed Xuseen Cilmi loo soo xiray kufsi uu u gaystay dhibane Farxiyo Cabdi Shakuur Bootaan oo Afar jir ah, kaas oo dhacay 14-kii May ee sanadkan ka dhacay degmada Wadajir.
Maxamed Xuseen Cilmi ayaa kadib lagu soo wareejiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana xabsiga dhexe loo taxaabay muddo kadib si loo hubiyo jiritaanka dambiga lala xiriiriyay ee uu ugu xirnaa hey’adda dambi barista Boliiska CID.
Sidoo kale Maxamed Xuseen Cilmi ayaa ay maxkamadda ciidamada mudeysay in la dhageysto dacwadda ka dhanka ah bilowgii september, waxaana dhageysiga kama dambeysta ah ee maxkamadda la soo gaba gabeeyay 24-kii bishan.
Eedeysanaha oo isna ka mid ah dadka fursadda loo siiyay fadhigan maxkamadeed ayaa markale ku jawaabay in uu isaga qaadanayo masuulliyadda dhibkii dhacay laakiin uusan ka jawaabi Karin sababta ku kaliftay inuu kufsado gabar ciyaal ah oo ay daris yihiin, waxa uu intaasi ku daray in xilli dambe oo wax walba ay dhaceen ay dib kala xumaatay.
Maqaal horeDEG DEG: Qarax culus oo goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho
Maqaal XigaFaah faahino ka soo baxaya qarax ka dhacay degmada Howlwadaag